On https: // www.bescatray.com (hadda ka dib, waxa loo gudbin doonaa sida bescatray.com), gaarka booqdaha waa of our walaac daran. Tani page Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu sharaxayaa nooca macluumaadka shakhsiga ah in la helo waxaa laga yaabaa in oo soo ururiyey by bescatray.com iyo sida macluumaadka loo isticmaali doono.
Raadi Engine Ads
goobaha kale Sida badan xirfadeed, bescatray.com maal on xayaysiinta internetka. Our xayaysiiya-hawlgalayaasha ka mid ah Ads Bing (Yahoo Ads). Si si aan u weyneyno advertising ROI online iyo si aad u hesho macaamiisha bartilmaameedka, bescatray.com dalbatay qaar ka mid ah codes raadraaca ee ay kuwa matoorada search in IPS user record iyo qulqulka page daawashada.
Business Data Contact
Waxaan soo ururin oo dhan xogta xiriir ganacsi diray iyada oo emails ama foomamka web on bescatray.com ka soo booqda. Aqoonsiga booqdaha oo xiriir la xiriira xogta la soo galay si adag loo hayn doonaa, waayo, bescatray.com ee isticmaalka gudaha. bescatray.com xaqiijin doonaan ammaanka iyo isticmaalka habboon ee xogta kuwa.
Waxaan kaliya u isticmaali doona macluumaadka shaqsiga lagu garan karo sida hoos ku qeexan, hadii aad si gaar ah u oggolaadeen in ay nooc kale oo loo isticmaalo, sidoo kale waqtiga macluumaadka shaqsiga lagu garan karo waxaa loo ururiyaa aad ka ama iyada oo qaar ka mid ah qaab kale oo ogolaansho aad ka:
1.We isticmaali doonaa macluumaadka shaqsiga lagu garan karo si uu u dhameystiro wixii amarro aad yeellay.
2.We isticmaali doonaa macluumaadka shaqsiga lagu garan karo si ay kuu siiyaan adeegyo gaar ah in aad codsatay, sida in ay gaaraan tafaariiqle ah.
3.We isticmaali doonaa macluumaadka shaqsiga lagu garan in ay ka jawaabaan su'aalo ah ee aad noogu soo diraan.
4.We isticmaali doonaa macluumaadka shaqsiga lagu garan in ay kuu soo diri emails waqti ka waqti, sida warsidayaasha iyo ogeysiisyo ku saabsan dallacsiinta our.
5.We u siidayn kartaa macluumaadka shaqsiga lagu garan sida sharciga ama nidaamka sharciga ah loo baahan yahay.
6.We u siidayn kartaa macluumaadka shaqsiga lagu garan in ay baaraan cidda khiyaamaysa bulshada, handadaad ama xadgudubyo kale wixii ah sharciga, xeerka ama qaanuunka, ama shuruudaha ama siyaasadaha Web site ka.
Baxdo / Xabsiyada
Marka codsigaaga, waxaan (a) saxda ah ama u cusboonaysiiso macluumaadkaaga shakhsiyeed, (b) joojiso dirista emails cinwaanka emailkaaga, iyo / ama (c) gab aad account si looga hortago wax iibsadaan mustaqbalka marayo account in. Waxaad samayn kartaa kaalisada qaybta macluumaadka macaamiisha, ama adoo taleefan, ama email waaxda Taageerada Macaamiisha codsigaaga bescatray.com ee candy@bescatray.com. Fadlan ha email lambarkaaga kaarka deynta ama macluumaad kale oo xasaasi ah.